दलान नेपाल : 'स्वाभिमान' अभियानको तीव्र तयारी
'स्वाभिमान' अभियानको तीव्र तयारी
फेसबुक मार्फत 'स्वाभिमान मधेश' नामक अभियानको उदघोष गरेका मधेशी युवा तथा बुद्धजीवीहरु त्यसलाई ठोस रुप दिन तीव्र तयारीमा जुटेका छन । अभियान स्रोतका अनुसार मधेशमा स्वाभिमान आन्दोलनको उदघोष सहित मधेशी पार्टीहरुका सक्रिय युवा तथा केही प्रसिद्ध बुद्धजिवीहरु लागी परेका छन । अभियानसंग आबद्ध युवा तथा बुद्धजिवीहरुको पछिल्लो केही समय यता भएको निरन्तर छलफलले यसलाइ चाडै ठोस रुप दिन लागेका हुन । जसका लागी हाल पत्रकार सिताराम अग्रहरी, बुद्धजिवी तुलानारायण साह र सदभावना पार्टीका युवा नेता संतोष मेहताले अभियानको सैद्धान्तिक तथा अन्य अवधारणाका वारेमा लिखित दस्तावेज तयार पार्दै छन । यी तीनै जनाले तयार पारेको लिखित दस्तावेजलाई वरिष्ट राजनितीक विश्लेषक सिके लालले अन्तिम प्रारुप दिने छन ।
के हो स्वाभिमान अभियान ?
केही समय पहिला फेसबुकमा स्वाभिमान मधेश देखा परेपछि सबैले त्यस्तै कसैले मधेशको नाममा चलाएको भनेर अडकलवाजी गर्दै खासै चासो लिएन । उक्त आईडीवाट दिनका दिन मधेशका वारेमा साहित्यीक पाराले विभिन्न प्रस्तुतीहरु ऋाउन थालेपछि कोई लेख्न पढन रुपी राख्ने युवाले चलाएको होला भन्ने आशंका वढयो तर वास्तवमा उक्त आईडी विभिन्न पार्टीका मधेशी युवाहरुको ठुलो तयारीको साथ गरिएको थियो । निर्वाचनमा पराजित भएपछि मधेशी पार्टीहरु धरमराउन पुगे । त्यस लगतै सबै पार्टीका युवाहरु नेतृत्वहरुलाई एकिकरण गर्न दबाब सिर्जनामा उत्रेका थिए । तर नेतृत्वहरुको नालायकीपनका कारण एकिकरण सम्भव नदेखेपछि युवाहरु छुटै तयारीमा जुटे । जसमा उनीहरु मातृका यादव सहित काठमाडौमा रहेका मधेशका बुद्धजिवीहरुवाट ठुलै धाप पाए । त्यसपछि यी युवाहरु मधेशमा कसरी सशक्क्त राजनिती शक्क्ति निर्माण गर्ने तर्फ छलफल वढाए र त्यसकै प्रतिफल स्वरुप अहिले मधेशमा स्वाभिमान आन्दोलन गर्ने उदघोष गर्दै त्यसको तयारीमा जुटे ।
के हुन्छ स्वाभिमान आन्दोलनमा ?
स्वाभिमान अभियान मधेशी पार्टीहरुले गरेको मधेश आन्दोलन जस्तो हुने छैन । यो विशुद्ध रुपमा मधेशमा कसरी सशक्क्त राजनिती नेतृत्व निर्माण गर्ने र मधेशको विभिन्न मुद्धा माथी व्यापक छलफल चलाउने छ । संघीयता, समावेशीता संगै मधेशमा स्वराजको मुद्धालाई काठमाडौ देखि मधेशका विभिन्न सहर हेदै गाउ गाउ सम्म छलफलहरु ऋभियानको रुपमा चलाउने तयारी छ यो अभियानमा । जसमा मातृका यादवका संगै सबै मधेशी पार्टीहरुका युवा नेताहरु सामेल छन ।
Dalan April 22, 2014 at 1:33 AM
तुलानारायण साह - मेरो सम्लग्नता छैन्
स्वाभिमान मधेश अभियानलाई सफलताको शुभकामना । तर यस अभियानमा म पनि सम्लग्न रहेको समाचार दलानमा सम्प्रेशन भएको छ । म उक्त अभियानमा कुनै पनि प्रकारले सम्लग्न नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
सद्भावना पार्टीका सन्तोष मेहताले केही दिनअघि सीके लालसँगको छलफल छ भन्दै मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो । त्यहाँ दिपेन्द्र झा, सिताराम अग्रहरी, सुरेन्द्र महतो, डा. रामकेवल साह, पंकज दास, गणेस मण्डल लगायतका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । आयोजक मेहताले स्वाभिमान मधेशको चर्चा चाँहि गर्नुभएको थियो । तर समाचारमा भनेजस्तै कुनै कार्यपत्र वा दस्तावेज नै तयार पारिने कुरा भएको थिएन । आयोजकहरूले नयाँ अभियान चलाउने भन्दैथियो । चलाउनुस्, राम्रै हुन्छ, मधेशी राजनीतिमा विकल्पको खोजी भइराखेको छ, तपाईंहरूलाई शुभकामना छ जस्ता सामान्य कुराकानी मात्र भएको थियो । सीके लालजी ले पनि त्यस्तो कुनै प्रकारको दस्तावेज नै दिने कुरा गर्नु भएको मलाई सम्झना छैन । यो समाचार कसरी आयो, चकित छु ।
देव शरण यादव - पत्रकार मित्रलाई विशेष आग्रह, जति हो त्यति नै लेखदा राम्रो हुने थियो ।
Dalan April 22, 2014 at 8:57 PM
दलान - यो समाचारमा आएको कमेन्टहरुका लागी धन्यवाद । दलानले पोष्ट गरेको यो समाचार पुर्ण सत्य छ । यदी कसैलाई यसको विश्वसिनयता माथी शंका छ भने स्यंम सत्यतथ्य पत्ता लगाए हुन्छ ।